Nhau - AngelBiss 2020 Nyowani Zvigadzirwa Ongororo Uye Kubudirira
AngelBiss 2020 Nyowani Zvigadzirwa Ongororo Uye Kubudirira
AngelBiss inotarisa pahunhu hwechigadzirwa uye hunyanzvi hwekugadzira zvinhu nguva dzese. Mumamiriro ezvinhu akaomarara ekuderera kwehupfumi hwenyika, AngelBiss achiri kuchengetedza kusimudzira kwakanaka, uye kambani yakawana kusimudzira nekukurumidza mumakore mashoma mashoma.
AngelBiss inosimbirira pakutungamirwa nevatengi uye nezvinodiwa mumusika, uye inogara ichigadzira zvigadzirwa zvitsva zvinokodzera musika wepakati-kusvika-wepamusoro. Parizvino, kambani yedu iri kuedza kutsvaga nekuvandudza zvigadzirwa zvinotevera:
1. Double-bhodhoro yezvokurapa yekukweva muchina-kunyanya inokodzera zviitiko zvakasiyana zvekuvhiya
2. Nyowani 5L oxygen jenareta- kunyangwe yedu gungano maitiro tekinoroji yakura kwazvo, uye ikozvino tiri kuyedza kuti ive nani.
Iyo yakagadziridzwa 5 litre okisijeni concentrator muviri unozoreruka uye kudiki, iko kuita kwechigadzirwa kuri kuvandudzwa.
3. Nyowani 10L okisijeni concentrator-kunyanya kusimudzira muchina goko zvinhu, kutsiva yaivapo simbi goko nehombodo yepurasitiki, kugadzirisazve chimiro chemukati chemuchina, huremu hweakakwidziridzwa okisijeni concentrator inoderedzwa zvakanyanya, uye zviri nyore famba uye takura
4. Ozone disinfection muchina- Sezvinozivikanwa, Ozone ine inoshanda kwazvo disinfection uye sterilization basa. AngelBiss R & D Dhipatimendi zvakare inoita ongororo mumunda wekushandisa ozone.
5.Nitrogen-oxygen muchina-uchishandisa PSA tekinoroji kupatsanura nitrogen uye oksijeni mumhepo, inonyanya kushandiswa mune dzakasiyana hypoxic kudzidzisa zviitiko
Ndokumbirawo mugare muchitarisira kutarisira!